लकडाउनको अवधिमा बलिउडले गुमायो १५ चर्चित कलाकार (तस्विरसहित) – Enepali News
June 14, 2020 447
आज फेरि चर्चित अभिनेता सुशान्त सि‌ंह राजपुतले आत्माहत्या गरेका छन् । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले गरे आत्महत्या
अहिले कोरोनाले भारत पनि आक्रान्त बनेको छ । धेरै चलचित्रहरु प्रदशन हुन पाएका छैन्न भने सुटिङ् नै रोकिएका छन् । त्यो भन्दा पनि बलिउडले यो लकडाउनको अवधीमा धेरै कलाकारहरु गुमायो । ३४ दिनको अवधिमा ऋषि कपुर, इरफान खान देखि लिएर वाजिद सम्म आइपुग्दा १५ जना सक्रिय कलाकारको निधन भइसकेको छ । हेरौ सबैको बिवरण :
५४ वर्षीय खानको मुम्बईको कोकिला वेन अस्पतालमा निधन भएको थियो।
उनी दुई वर्षदेखि क्यान्सरको उपचार गरिरहेका थिए। खानलाई न्युरोइन्डोक्राइन ट्युमर भएको थियो।
ऋषि कपुरबलिउड अभिनेता ऋषी कपुरको ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
अमेरिकामा भन्डै एक वर्ष क्यान्सरको उपचार गरेपछि गत सेप्टेम्बरमा ऋषि मुम्बई फर्किएका थिए ।
त्यतिबेला उनले ‘११ महिना ११ दिनपछि घर फर्किएँ’ भन्दै ट्वीट गरेका थिए ।
गत फेब्रुअरीमा पनि उनी दुई पटक अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
सुरुमा दिल्ली जाँदा उनलाई ‘इन्फेक्‍सन’ले सताएको थियो भने मुम्बई फर्किएपछि ज्वरो आएको थियो ।
बलिउड अभिनेता ऋषी कपुरको ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
बलिउडका चर्चित संगीतकर्मी वाजिद खानको यही आइतबार अबेर राती निधन भएको हो ।
उनको कोरोनाभाइरसका कारण ४२ वर्षको उमेरमा निधन भएको पुष्टि भएको थियो ।
लामो समयदेखि मृगौलाको समस्यासँग जुधिरहेका वाजिदलाई कोरोना संक्रमण पनि भएको थियो ।
उनको मुम्बईको एक अस्पतालमा उपचार चलिरहेको थियो ।
अचानक स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उनलाई भेन्टिलेटर सपोर्टमा राखिएको थियो ।
प्रेक्षा मेहेता :
क्राइम पेट्रोलमा अभिनय गरिरहेकी प्रेक्षा मेहेताले सु*साइड गरेकी हुन् ।
गेम शो ‘खोल दो’ मार्फत टेलिभिजनमा प्रवेश गरेकी प्रेक्षा पछिल्लो समय क्राइम पेट्रोलमा देखिएकी थिइन ।
मेबिना माइकल :
चर्चित भारतीय अभिनेत्री मेबिना माइकलको सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको हो ।
कन्नड टेलिभिजनकी माइकलको २२ वर्षको उमेरमा मंगलबार बेलुकी सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको भारतिय मिडियाले जनाएका छन् ।
मंगलबार आफ्नो गृहनगर मडिकेरी गइरहेका बेला दुर्घटना भएको थियो ।
योगेस गौर :
2018 mein humne Deenanath Puraskar se Yogesh ji ko sammanit kiya tha.
9:33 PM – May 29, 2020
सलमानले उनलाई डेब्यु गराएकाे र आफ्नाे भाईलाई जस्ताे केयर गर्ने भएकाेले उनलाई धेरैले सलमानकाे भाइकाे उपनामले चिन्ने गरेकाे भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
तर उनले माेहितकाे मृत्युकाे बारेमा औपचारिक रुपमा केही बाेलेका छैन्न तर उनी शाेकमा डुबेकाे समाचारमा बताइएको छ । मोहित ६ महिना अगाडी देखि दिल्लीको एक अस्पतालमा क्यान्सरसँग लडिरहेका थिए । उनले क्यान्सरलाई जित्न सकेन्न र सानै उमेरमा ज्यान गुमाए ।
मेमित ग्रेवल :
10:23 PM – May 15, 2020
सचिन कुमार :
चर्चित भारतीय टेलिश्रृंखलाका ‘कहानी घर घरकी’ मुख्यका मुख्य कलाकार सचिन कुमारको ४२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।
उनको हृदयघातबाट शुक्रबार निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
‘पीके’ र ‘रक अन’ जस्ता हिन्दी फिल्ममा अभिनय गरेका अभिनेता साई गुंडेवरकाे गएकाे आइतबार अमेरिकामा निधन भएकाे छ ।
सन् १९७८ फेब्रुअरी २२ मा जन्मिएका साई गएकाे एक वर्षदेखि ब्रेन क्यान्सरसँग लडिरहेका थिए । साईकाे निधनप्रति उनका साथी फिल्म उद्याेगका कलाकारहरुले समाजिक सञ्जालमा शाेक व्यक्त गरिरहेका छन् ।
महाराष्ट्रका गृह मन्त्री अनिल देशमुखले पनि अभिनेता साईप्रति श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
क्राइम पेटाेलका अभिनेता हुन्
बेजन दारुवाला :
After My Father, 1 of my favourite astrologers and human, #BejanDaruwala passed away. y heartfelt condolence. परमात्मा उनको सद्गति दें। वो मेरे प्रशंसक थे. एक बार किसी शो पर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया था। #RIPBejanDaruwalla एक बालक मन, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। प्रार्थना हरि ॐ॥
PrevBreaking: नेपालमा आज पनि थपिए ४२५ जना कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ५७६० पुग्यो
Nextनाकामा कडाई: उपत्यका प्रवेश गर्ने सयौं सवारी साधन नाकाबाट फर्काइयो
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल (1896)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1428)